တရုတ်နိုင်ငံက ရုရှားနိုင်ငံနှင့်အတူ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းစေရန် ရှီကျင့်ဖိန် ပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း Heilongjiang ပြည်နယ် Harbin မြို့ရှိ လေဆိပ်၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၁၁ ရက်တွင် တရုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား ရုရှားနိုင်ငံသို့ မထွက်ခွာမီ တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က တရုတ်နိုင်ငံသည် ကာကွယ်ဆေး နှင့် ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှု သာမက COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် စစ်ဆေးခြင်း အပါအဝင် နယ်ပယ်များတွင် ရုရှားနိုင်ငံနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်နှင့် virtual အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာတွင် ရှီက တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ရုရှားနိုင်တို့သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မှစ၍ COVID-19 ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင် တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း ၊ အပြန်အလှန်အကူအညီပေးသည့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးများ၏ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လွင်ကြောင်း နှင့် အားလုံးအတွက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအသိုက်အဝန်းကို တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရာတွင် နိုင်ငံတကာ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို မြှင့်တင်ရာတွင် အပြုသဘောဆောင်သည့် ပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
China to strengthen anti-pandemic cooperation with Russia: Xi
BEIJING, Dec. 15 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping on Wednesday said that China will strengthen cooperation with Russia in areas including COVID-19 virus testing, as well as vaccine and drug development.
Atavirtual meeting with his Russian counterpart Vladimir Putin, Xi said China and Russia have been actively cooperating in the fight against the COVID-19 pandemic since last year, vividly illustrating the connotation of bilateral relations featuring mutual assistance, and making positive contributions to promoting international solidarity against COVID-19 and buildingaglobal community of health for all. ■
Photo – Chinese medical experts pose foraphoto before boardingaplane to Russia at an airport in Harbin, northeast China’s Heilongjiang Province, April 11, 2020. (Photo by Xu Xu/Xinhua)